Taageerro Ku Socota Barkhad Jaamac Batuun Oo Isku Sharaxay Kursiga Madaxweyne Ku Xigeenka WADDANI | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Aniga oo ka mid ah taageerayaasha xisbigga WADDANI, waxaan si mugle u taageeraya Garyaqan Barkhad Jaamac Xirsi “Batuun?, oo ku dhawaaqay inuu u sharaxanyahay jagada Madaxwayne Ku-Xigeenimo ee xisbigga WADDANI, oo haatan ay kula tartamayaan 5 musharax oo kasoo jeeda Gobolka Awdal.
Mudadii uu xilalka kala duwan kasoo qabtay Xukuumadda Kulmiye iyo Xisbigga WADDANI, , Garyaqaan Barkhad wuxuu muujiyay karti iyo hufnaan, xilkasnimo dheeraad ah, wadaninimo iyo daacidnimo.
Waa geesi aan gaban iyo halyeeyay u heelan horumarka Somaliland.
Waa aqoonyahan garyaaqana oo hanan kara xilkaas. Waxaan ku boorinayaa dhamaan dhalinyaradda Xisbigga WADDANI , ergooyinka qurbajoogta iyo Gobolada kale ee Somaliland , inay codkooda siiyaan garyaqaan Barkhad Jaamac Xirsi “ Batuun”.